Mayelana NATHI - Qingdao Zhuoya Machchan Co, Ltd.
Qingdao Zhuoya Imishini Co, Ltd.
I-Qingdao Zhuoya Machchan Co, Ltd yinkampani eyandisa ulwazi lwesayensi nezobuchwepheshe ihlanganiswe nocwaningo nentuthuko, ukwakheka, ukuthengiswa kanye nezinsizakalo, ekubambeni iqhaza ekwenziweni kwemishini yokusebenza kwamapulasitiki ikakhulukazi imishini yokusebenza kwefilimu epulasitiki. Singabantu uchwepheshe ekwenziweni umugqa epulasitiki umugqa & umshini wokugcwalisa umshini weplastiki, umugqa womshini weplastiki wokwenza umshini, umugqa womshini wokufakelwa owenziwe ngepulasitiki, umugqa womshini wokuphrinta we-eyelash owenziwe ngomshini weplastiki, umugqa womshini weplastiki wenethiwekhi. , ulayini womshini wepulasitiki wokuphrinta.
Selokhu yasungulwa ngonyaka ka 2002, iZhuoya ibingumholi we ndawo epulasitiki eyakhiwe ngomshini eChina nokusebenza kanzima okuqhubekayo, ukuvuselela kanye nokwenza izinto ezintsha. Sibe neqembu elinamandla elihlanganisa ukuphathwa, ubuchwepheshe, ucwaningo kanye nokuthengisa. Sinikezwe “i-good contract & good faith unit”, “Hi-tech Enterprise”, kanye ne- “High-Integrity Enterprise” njll.
UQingdao Zhuoya uhlala elalela umgomo wokuthi "isikweletu uyisisekelo, ikhwalithi iyimpilo, ukuvuselelwa kuyimpokophelo, inkonzo yiyona eyinhloko", ugcina isethembiso sekhwalithi kumakhasimende, ugxile ekwaziseni nasekuhlakuleni ithalente, usebenzisana nezesayensi eziningi nezikhungo zocwaningo . Sinamandla obuchwepheshe obuqinile nezindlela zokuhlola eziphelele, sihlanganisa izinzuzo zobuchwepheshe obuthuthukile kanye nokusebenza okuqinile futhi sewethule ochwepheshe abaningi abanesipiliyoni sokusebenza ocwaningweni nasentuthuko nasekwenzeni umugqa wamashini weplastiki wokufakelwa kwemishini, nokuqonda kanye nesipiliyoni sokuqongelelwa kwenqubo yepulasitiki nemiklamo yemishini yepulasitiki ukumadanisa. Konke lokhu kuqinisekisile ukusebenza okuphezulu kakhulu nokusebenza okuhle kokuqanjwa kwemishini yemishini ye-plastiki.
Imigqa yethu yomshini wangaphandle weplastiki unikezwa emakethe yangaphakathi nangaphesheya enedumela elihle. Sithumela imishini eRussia, eRomania, e-Uganda, eNigeria, eTunis, eKazakhstan, e-Iran, eKuwait, eNdiya, ePakistan, eTopiya, eTanzania, eMongolia, e-Indonesia, eVietnam, eMyanmar nakwamanye amazwe. Semukela ngokweqiniso ukuvakasha kwakho futhi sizonikeza izinhliziyo zethu ezifudumele nezinsizakalo kanye nokubambisana ngokuwina ngomkhiqizo ongcono kakhulu.
>> Uhambo lwefektri
>> IKhasimende & Umbukiso Photo
Ngeminye imininingwane, sicela uxhumane nathi manje！